Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်ရှာဖွေသူများ Androidsis ပါ
အန်းဒရွိုက်စက်ပစ္စည်းအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်ထက်ကြီးသောအားသာချက်များရှိသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်း၏ customization ၏မြင့်မားသောအဆင့်ကိုပြောဆိုလေ့ရှိသော်လည်းအသုံးအ ၀ င်ဆုံးနှင့်တန်ဖိုးထားအားသာချက်များအနက်မှတစ်ခုသည်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာရှေ့တွင်ရှိသကဲ့သို့ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲပါ.
ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ စူးစမ်းရန်နှင့်စီမံရန်ရည်စူးထားသောအပလီကေးရှင်းများသည်မည်သည့် Android စက်ပစ္စည်းတွင်မဆိုအရေးကြီးဆုံးအက်ပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှင့်အတူသုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏ဖိုင်များကို ဖြတ်၍ ၎င်းတို့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသောဖိုင်များကိုရှာနိုင်သည်၊ ရရှိနိုင်သောသိုလှောင်ခန်းနေရာကိုစီမံခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ဖိုင်များကိုရွှေ့ခြင်းနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်အတန်ငယ်ပျင်းရိသောကြောင့်ဖိုင်အဖွဲ့ကိုအလွန်စိတ်မ ၀ င်စားသော်လည်း၊ သုံးစွဲသူအားလုံးသည်ဖိုင်ရှာဖွေသူလိုအပ်သည်။ နောက်တစ်ခုငါတို့တွေ့လိမ့်မယ် သင်၏ Android device မှသင်၏ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်စူးစမ်းရန်အကောင်းဆုံး application အချို့နှင့်ရွေးချယ်ခြင်း.
1 ES File Explorer / Manager Pro ပါ
2 MK Explorer ကို (ဖိုင်မှတ်တမ်းမန်နေဂျာ)
4 ASUS ဖိုင်မန်နေဂျာ (File Explorer)
5 ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကိုအလွန်အံ့သြစေ
ES File Explorer / Manager Pro ပါ
ES File ကို Explorer ကို ၎င်းသည် "ထာဝစဉ်တည်ရှိနေသော" အသုံးချပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အကောင်းဆုံးမှာထိုအရာဖြစ်သည် ၎င်းတွင် file explorer တစ်ခုအားသင်မေးနိုင်သောအင်္ဂါရပ်အားလုံးနီးပါးရှိသည်မရ။ အခြားသူတစ် ဦး က၎င်း၏ ၀ ယ်ယူပြီးနောက်အက်ပလီကေးရှင်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းကိုလုံးဝမထောက်ခံပါ၊ သို့သော်၎င်း၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗားရှင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
Mk စူးစမ်းသူ ၎င်းသည်အလွန်အသစ်သော file manager တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအတွက်ပေါ်လွင်သည် အလွန်ရိုးရှင်းသောလျှောက်လွှာfrills မပါဘဲအသုံးပြုသူများစွာကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ interface သည် Material Design နှင့်ကိုက်ညီပြီးဖိုင်မန်နေဂျာ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များရှိသည်၊ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ဖျက်ခြင်း၊ SD ကဒ်ထောက်ခံမှုနှင့် root access ၎င်းကိုဘာသာစကား ၂၀ ဖြင့်ကမ်းလှမ်းပြီး built-in text editor, gallery နှင့် music player လည်းပါ ၀ င်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ cloud သို့မဟုတ် network storage ကိုမေ့လိုက်ပါ။ ဘာအတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားလဲ၊ အဲဒါကစျေးသက်သက်သာသာနဲ့ကောင်းကောင်းရတယ်။
တိုက်ရိုက်ရိုးရှင်းသောနာမည်ဖြင့်“ File Manager” သည်မကြာသေးမီကကမ်းလှမ်းသောအတော်လေးမကြာသေးမီ application တစ်ခုဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှုအင်္ဂါရပ်များအခြေခံအကျဆုံးမှ cloud သိုလှောင်မှုအင်္ဂါရပ်များ၊ NAS လိုက်ဖက်မှုနှင့်အခြားအရာများ မင်းရဲ့အပလီကေးရှင်းတွေ၊ မင်းရဲ့တေးဂီတနဲ့မင်းရဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုမင်းတောင်ကြည့်နိုင်တယ်။ ထိပ်သို့, ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ကြော်ငြာမရှိပါ.
၎င်း၏ရိုးရှင်းသော user interface ကြောင့်၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ File Manager +ဖြင့်သင်သည်သင်၏စက်၊ NAS (ကွန်ယက်သိုလှောင်မှု) နှင့် Dropbox နှင့် Google Drive ကဲ့သို့ cloud storage ကိုလွယ်ကူစွာစီမံနိုင်သည်။ […] ၎င်းသည်အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို (ဖွင့်ခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ဖိုလ်ဒါများရှာခြင်း၊ မိတ္တူကူးခြင်း၊ ဖြတ်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ နာမည်ပြောင်းခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ ချုံ့ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း၊ မှတ်သားခြင်းနှင့်စုစည်းခြင်း) apk အပါအ ၀ င်
ရေးသားသူ: ဖိုင်မန်နေဂျာ Plus
ASUS ဖိုင်မန်နေဂျာ (File Explorer)
ASUS ဖိုင်မန်နေဂျာဖြစ်သည် ကိရိယာအများစုနှင့်လိုက်ဖက်သည် Android၊ ASUS မဟုတ်သူများပင်။ ၎င်းတွင် LAN နှင့် SMB၊ cloud storage နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သောရိုးရှင်းပြီးသန့်ရှင်းသော interface တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အက်ပ်အတွင်း ၀ ယ်ယူခြင်းမရှိသော်လည်းကြော်ငြာအချို့နှင့်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သူ့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအားနည်းချက်က root access မပေးဘူး။
ASUS File Manager သည်၎င်းတို့အားဖိုင်လ်များအားလုံးကိုစက်မှတ်ဥာဏ်၊ micro-SD card၊ local area network (သို့) cloud storage account များတွင်သိမ်းထားသည်ဖြစ်စေထိန်းချုပ်ရန်ကူညီပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ASUS File Manager သည်သင်၏သိုလှောင်မှုနေရာများရှိဖိုင်များကိုကူးခြင်း၊ ရွှေ့ခြင်း၊ အမည်ပြောင်းခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝေမျှခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ဖိုင်များကို browse လုပ်ပြီးအမျိုးအစားအလိုက်၎င်းတို့ကို ၀ င်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။
ဖိုင်မန်နေဂျာ (File Explorer)
ရေးသားသူ: မိုဘိုင်း, ASUSTek ကွန်ပျူတာ Inc
Amaze File Manager သည် Android အတွက် Open source file explorer သည်ရိုးရှင်း။ ပေါ့ပါးသောအတွေ့အကြုံကိုပေးနိုင်ရန်အာရုံစိုက်သည် ၎င်းကိုသာလိုအပ်သူများအတွက်သူတို့၏ဖိုင်များကိုကြည့်ပါ။ Material Design ဖြင့် SMB ဖိုင်များကိုဝေမျှခြင်း၊ app များ၊ root explorer နှင့်အခြားအရာများကိုဖယ်ရှားရန် built-in application manager တစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုငွေကြေးကူညီလိုလျှင်ရွေးချယ်နိုင်သော in-app ၀ ယ်ယူမှုများကိုကမ်းလှမ်းရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Android အတွက်ဖိုင်မန်နေဂျာများ၏သေးငယ်သည့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သော်လည်းအခြားများစွာရှိသေးသည်။ သင်တစ်ခုခုသုံးသလား။ မင်းသူ့ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ၊ ဘာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့လဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android အတွက်အကောင်းဆုံးဖိုင်စူးစမ်းရှာဖွေသူများ
Samsung Device နဲ့ bug အသစ်